Fetin’ny faran’ny taona : Tafakatra 140 000 Ariary ny lanonana -
AccueilSongandinaFetin’ny faran’ny taona : Tafakatra 140 000 Ariary ny lanonana
Fetin’ny faran’ny taona : Tafakatra 140 000 Ariary ny lanonana
Samy efa miomana fatratra amin’ny fiatrehana ny anio alina ny ankamaroan’ny malagasy. Izany hoe, ireo manana fahefa-mividy ka mieritreritra ny hivoaka any amin’ireo toerana filanonana ireny. Manao izay ho afany ihany koa ireo trano filanonana manomana hetsika ho an’ireo tonga hamarana ny taona ao aminy. Maka mpihira malaza, manao hanim-pitoloha ary manomana fanomezana kely ho an’ireo mpilanonana. Ho an’ny eto an-drenivohitra, maro ireo toeram-pilanonana manao hetsika ny faran’ny taona ho an’ny anio alina ka miezaka manao izay mampiavaka azy sy hisarahana ny mpilanonana amin’ny alalan’ny karazana tolotra samihafa tsy ampoizina. Ny sasany manomana mofomamy raha toa ka, manapoaka afomanga ny sasany rehefa migadona ny sasak’alina. Ny an’ny trano filanonana sasany moa dia misy hatramin’ny vary amin’ny anana hanomezana fahafaham-po ireo mpanjifany.
Manodidina ny 80 000 Ariary isan’olona kosa ny mora indrindra amin’ny fidirana hatramin’ny sakafo izay hisafidianana amin’ireny trano filanonana ireny. Tafakatra hatramin’ny 140 000 Ariary isan’olona kosa ny trano filanonana hafa, izay miankina amin’ny toerana sy ny mpihira hanafana ny lanonana ary ny tolotra amin’ny sakafo. Eny hatramin’ny ankizy mandoa saram-pidirana avokoa, fa mihena 10 na 20 isan-jato eo ho eo. Mbola tsy tafiditra ao anatin’io vidim-pidirana io kosa ny zava-pisotro misy alikaola fa tsy maintsy vidina mitokana ary tsy maintsy ao ihany no mividy azy satria tsy azo atao ny mitondra izany avy any ivelany, araka ny fanazavana. Matetika, tsy afa-misaraka amin’ireo mpilanonana indrindra ireo olon-manan-kaja ny “whisky” rehefa fetin’ny faran’ny taona tahak’izao. Lafo mihoatra ny eny amin’ny mpivarotra tsotra anefa ny vidin’izy ireny rehefa ao amin’ny toeram-pilanonana. Eo anelanelan’ny 2 000 000 Ariary hatramin’ny 3 000 000 Ariary ny vidiny rehefa fotoana toy izao.
Voaporofo fa tsy mpitahiry mpanao ratsy ny fanjakana, toa izao nahazo an’i Nivo Ratiarison izao izay talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny Serasera omaly. Taorian’ny fitarainana izay nataona olon-tsotra teny amin’ny Bianco na ny birao mahaleo tena miady ...Tohiny